ထိပ်တန်းအရွယ်ရောက်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ-ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ၊ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္အဂၤါရပ္မ်ား - ဗီဒီယိုစကားပြောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း! နိုင်ငံအားလုံး၊နိုင်ငံခြားရေး၊လောကဓာတ်လုံးကို။
)။ အထဲကစစ်ဆေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်းစာရင်းကိုအောက်တွင်လိုက်နာကျွန်တော်တို့ရဲ့လင့်များဖတ်ရှုဖို့ကျွန်ုပ်တို့အပြည့်အဝအတွက်-အသင်းတော်များ၏အသီးအသီးအရွယ်ရောက်ချိန်းတွေ့ဆိုက်နှင့်ယှဉ်သောသင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်စရိတ်နှင့်အင်္ဂါစာရင်း၊အသုံးပြုသူပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များနှင့်ဗီဒီယိုသင်ကူညီမှလက်ျာဘက်ရွေးချယ်မှုကိုလုပ်။ နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အကြီးမားဆုံးအပြင်အွန်လိုင်းအရွယ်ရောက်ချိန်းတွေ့။ ဒါဟာအကျိုးခံစားခွင့်မှတစ်ဦးကြီးမားသောဒေတာဘေ့စ၏ကျော်သန်းအဖွဲ့ဝင်များလာက၏ အကြီးဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်။ တကယ်တော့၊အကြီးဆုံးများ၏အရေအဖွဲ့ဝင်များသင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ကိုအပေါ်မည်သည့်ချိန်းတွေ့ဆိုက်။ ဤသည်ကိုဆိုလိုသည်၊နှင့်အတူကျော်သန်းအဖွဲ့ဝင်များ၊သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းရှာဖွေခြင်းတစ်ဦးလိင်-ရက်စွဲ၏။ သက်ရှိ၏အများဆုံးအရွယ်ရောက်ပြီးလူသိများချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအပေါ်။ ဒါဟာအရှည်ကြာဆုံးတစ်ဦးအပြေး၊အများဆုံးတည်ထောင်ရွယ်ရောက်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ ဒါဟာဒုကဒေတာဘေ့စရှိပါတယ်စိုက်ပျိုးဖို့အကြီးမားအချိုးအစားနဲ့အခုအကြီးဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်။ ဒါကြောင့်လည်းအများဆုံးပြည့်စုံသောအင်္ဂါရပ်-အစုံပေါ်ရရှိနိုင်သောမည်သည့်ချိန်းတွေ့ဆိုက်-ကိုယ့်စစ်ဆေး။ ရည်ရွယ်ထားကိုကူညီရှာဖွေအွန်လိုင်း နှင့်အော့ဖ်လိုင်းချိတ်။ ဒါဟာအများဆုံးနက်ရှိုင်းအတွက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအတွက်ရရှိနိုင်၊ခွင့်ပြုခြင်းအရည်အချင်းကိုအပေါ်အတွက်အသင့်ရဲ့ပြီးပြည့်စုံသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲ။ အဲဒီမှာမြောက်မြားစွာအသိုင်းအင်္ဂါရပ်များ၊ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများ၊အရွယ်ရောက်ပြီးဖျော်ဖြေရေးရွေးချယ်စရာနှင့်ပို။၊ဒီအဖြည့်စွက်အရွယ်ရောက်ချိန်းတွေ့။ အဆောက်အသင့်ပရိုဖိုင်းကိုကြာအဖြစ်ရေရှည်သို့မဟုတ်တိုတောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ချင်သောကြောင့်၊။ အပြည့်အဝနှင့်အတူအသုံးဝင်သောအင်္ဂါရပ်ကိုကူညီတက်ချိတ် တူအခြားအစိတ်အရွယ်ရောက်သူ။ တူကမ်ချက်တင်၊အသက်ရှင်သောဆှဖျော်ဖြေပွဲပေး။၊အဖွဲ့ဝင်ဗီဒီယိုများ၊ဘလော့ဂ်များ၊ချက်တင်အခန်းပေါင်း၊ဖိုရမ်များ၊ကျောင်းများနှင့်အများကြီးပိုရှိပါတယ်၊များများကိုသိမ်းပိုက်စောင့်ရှောက်။ သူတို့ကလည်းတောင်းဆိုဖို့ရှိသည်ကျော်သန်းပရိုဖိုင်း၊ဒါကြောင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတစ်ခုခုမှဖြည့်ဆည်းမည်သည့်အလိုဆန္ဒ။ ည့္မယ္အသုံးပြုသည်။ လွယ်ကူလိင်ကိုရှာဖွေကူညီပေးသည်နှင့်သင်ဒေသခံလူကြီးများအတွက်ဆှဆုံ၊အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်အော့ဖ်လိုင်းချိတ်။ ဖွဲ့ဝင်များဖေါ်အကဆြုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ဖို့မျှော်လင့်ရှာတွေ့နဲ့တူ-စိတ်နှင့်စုံတွဲများများအတွက်အဘယ်သူမျှမ-အကြိုး။ ဆိုက်ပေးသည်ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာအပါအဝင်ကမ်ချတ်။ အပြည့်အဝအဖွဲ့ဝင်များကိုလည်းဝင်ရောက်အခမဲ့ဖစ္သျပြသ၊နှင့်ဆိုက်ပဲစုဆောင်း၊အသစ်အဖွဲ့ဝင်များကိုနေ့တိုင်း။ ထောက်ပံ့အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူဆက်သွယ်ရေးကိရိယာရှာဖွေဖို့အွန်လိုင်း နှင့်အော့ဖ်လိုင်းချိတ်။ သငျသညျဆောကျနိုငျတစ်ခုအတိမ်အနက်အတွက်ပရိုဖိုင်နှင့်အတူဝတ်လစ်စလစ်ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗီဒီယိုများစူးစမ်း၊အခြားအဖွဲ့ဝင်များဆှအကြောင်းအရာ၊ချက်တင်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ပေးပို့ပါ၊အပေါင်းနှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံအွန်လိုင်းအသိုင်းအဆိုက်မှတဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ဖိုရမ်များစကားပြောခန်း။ ဤအချက်များအားလုံး ပေါင်းစပ်ကိုဆက်ကပ်ရန်တစ်ဦးပြည့်စုံသောအရွယ်ရောက်ချိန်းတွေ့။ ပါမည္၊အခမဲ့ ။ (ရက်စွဲကလပ်)ဆိုသည်မှာအလွန်ကြီးစွာသောအသုံးဝင်သောအင်္ဂါရပ်များအကူအညီၡမ်ားနှင့်စုံတွဲများတက်ချိတ်။ င်းတို့သည်အချက်အလက်များအပြည့်အဝစစ်မှန်သောရှာနေကြသူအဖွဲ့ဝင်များလိင်များအတွက်လဲလှယ်အတူဒေသခံနှင့်အဝေးအဖွဲ့ဝင်။ တူဖိုရမ်များ၊အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်း၊ဗီဒီယိုရွေးချယ်မှုများနှင့်တိုးတက်လာသောရှာအင်္ဂါရပ်ကိုထောက်ပံ့ပေးနပ္သဆံုနဲ့တူ-စိတ်တူအရွယ်ရောက်သူကိုတက်ချိတ်ချင်တယ်။ သင်တို့သည်အသေးစိတ်ရှာ၊တည်နေရာသင့်ရဲ့စံပြပွဲ၊စကားပြောသုံးစာတိုေစာတိုပေးပို့သို့မဟုတ်တည်းဖြတ်၊အပေါင်းလက်လှမ်းတစ်ကျယ်ပြန့်စစ်ခင်းကျင်း၏လစ်စလစ်ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်ရီကေျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုက်ကိုပေါင်းစပ်ချိန်းတွေ့ဒြပ်စင်များနှင့်အတူအရွယ်ရောက်ဖျြော။ဤအရာအားလုံးဝင်ရောက်ဖို့လွယ်ကူသကဲ့သို့သင်တို့ကိုရွှေ့နိုင်။
ယုတ်နေ့စွဲကိုထောက်ပံ့ပေးလုံခြုံသတိပညာအာကာသရှာဖွေဖို့ဆှဆုံအွန်လိုင်း။ သငျသညျပေးပို့နိုင်ပါတယ်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျ၊မက်ဆေ့ခ်ျများမှဖုန်းများ၊သို့မဟုတ်စကားပြောအသုံးပြုခြင်းကို။ လည်းရှိပါတယ်ရပ်ရွာလူထုပါချက်တင်အခန်းပေါင်း၊နှင့်ဖိုရမ်များ၊သင်တို့အားချင်ပါတယ်လျှင်သင်ကပါဝင်ပတ်သက်ရ ဒီတက်ကြွအွန်လိုင်းအသိုင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူကဲ့သို့အဘယ်သူမျှမကြိုးချိတ်။ အထောက်အကူဒါဟာင့်အဖွဲ့ဝင်များတက်ချိတ်ဖို့အတွက်ဆှဆုံနှင့်အွန်လိုင်း ။ သင်သည်ချက်တင်စကားပြောနိုင်မှာသုံးစာသားသို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ကမ်တွေ၊စူးစမ်းလစ်စလစ်နဲ့ဆှဓာတ်ပုံများလက်လှမ်းလုပ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူရုပ်ရှင်များ၊စောင့်ကြည့်တိုက်ရိုက်လိင်ဖျော်ဖြေပွဲနှင့်ပို။ ၏အစိတ်အပိုင်းကိုရှာဘန်မိသားစု၊ဒါကြောင့်တက်လက်မှတ်ထိုးဒီကိုဆိုလိုသည်သင်ဝင်ရောက်ခွင့်ရသူတို့၏ကျယ်ပြန့်ဒေတာဘေ့စ၏အဖွဲ့ဝင်များ။ ဒီတိုးတက်ကောင်းမွန်ဖွဲ့ဝင်အရေအတွက်ကိုသင်နိုင်ပါတယ်။ သင်သိဘယ်တော့မှအရောက်(မ-တကယ့်လူတစ်ယောက်အကြောင်း)၊နှင့်စွန့်ပစ်အချိန်အများကြီး။ ထိုပြန်ကြားချက်များမှာတစ်ခုသဘောထားပြီးမကြာခဏလုပ်မအာရုံ-အလွန်ဆင်းရဲဗမာစေခြင်းငှါမှုကြောင့်နိုင်ငံခြားယင်။ စာရိုက်ပြန်ကြားချက်သည်အလွန်။ အများအားဖြင့်နိုင်ငံတကာလိမ်လည်&အတုပရိုဖိုင်း။ အလွန်စျေးကြီး။ စည်းကမ်းချက်များ&အခွပြောဝင်စာချုပ်နှင့်စောင့်ရှောက်ရကြမည်ပေးဆောင်တက်သို့မဟုတ်သူတို့သွားဖို့ကြွေးမြီစုဆောင်းလိုက်မှတက်သင်။ မားဆုံးကိုက်ချွတ်။ အတုပရိုဖိုင်း၊အတုဓာတ်ပုံများ၊အတုပြန်ကြားချက်သဝဏ်။ စုစုပေါင်းစွန့်ပစ်၏အချိန်နှင့်ငွေကို။ လိမ်လည်မှုအနုပညာရှင်တွေ။ သင်ခန်းစာသင်ယူ:သင်ကမယုံကြည် မည်သူမဆိုအွန်လိုင်း။.
စူးစမ်း၊ငါ့စာမျက်နှာ ချက်တင်ကစားတဲ့ ၁၈ ပေါင်း ချက်တင်ကစားတဲ့ ၁၀ တွေ့ဆုံရန်အဘို့လိင် ချိန်းတွေ့ဆိုက် လိင်နှင့်ချိန်းတွေ့မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဝင်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ ဗီဒီယို အနက်ချိန်းတွေ့ ဗီဒီယိုချက်တင်ဆိုဒ်များချိန်းတွေ့